မထုမိလိုက်တဲ့ တူတချက် - FunnyPC
by H - October 29, 2019
တခါတုန်းက လူသွားလူလာ များတဲ့ တောလမ်း တနေရာမှာ ကျောက်တုံးကြီး တတုံး ရှိသတဲ့ ။ အဲဒီကျောက်တုံး ပေါ်မှာလည်း စာတချို့ ရေးထွင်း ထားပါတယ် ။ ကျောက်တုံးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာကတော့ ... " ဤကျောက်တုံးကြီးကို ဆယ်ပေါင်တူနှင့် အချက် တထောင်ပြည့်အောင် ထုခွဲလျင် တသက်စာ ချမ်းသာသော ရတနာများ ရမည် " တဲ့ ။
လမ်းသွားလမ်းလာတွေက အဲဒီစာကို မြင်တော့ ပြုံးကြတာပေါ့ ။ အရူး တယောက် လက်ဆော့သွားတာ နေမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ် ။
ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် ။ ကျောက်တုံးကြီး ထုခွဲရုံနဲ့ တသက်စာ ချမ်းသာဖို့ ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်လွန်း တယ်လေ ။ နောက်ပြီး ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ အချက်တထောင် ထုဖို့ ဆိုတာ တော်ရုံ ဇွဲသတ္တိနဲ့လည်း မဖြစ်ဘူး မဟုတ်လား။
ဒီလိုနဲ့ ခရီးသွားတွေဟာ အဲဒီကျောက်တုံးကြီးကို ခဏတဖြုတ် နားစရာ အနေနဲ့ပဲ ထိုင်ကြ မှီကြပြီး ထုခွဲဖို့ကို ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြဘူးတဲ့ ။
တနေ့မှာတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ သောက်ရေဗူးနဲ့ ရောက်လာပြီး အဲဒီကျောက်တုံးကြီးကို ထုခွဲ ပါတော့တယ်။ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာတွေ ကတော့ သူ့ကို လှောင်တဲ့ သူကလှောင်။ ပြုံးတဲ့သူ က ပြုံး။ ချီးမွမ်းတဲ့သူက ချီးမွမ်း ။ အရူးလို့ ပြောတဲ့သူက ပြောပေါ့လေ ။
ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ဇွဲမလျှော့ပဲ ဆယ်ပေါင်တူကြီးနဲ့ ထုလိုက် ၊ ရေသောက်လိုက်နဲ့ ကြိုးစားနေ ဆဲပဲ ။
လူတွေကလည်း တယောက်ပြီး တယောက် လာပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ဆက်မလုပ်ဖို့ ပြောသူက ပြော ၊ တကယ် ချမ်းသာမယ် ဆို ရှေးလူတွေက ထုခွဲခဲ့ကြမှာပေါ့ ။ တကယ် မဟုတ် လို့သာ အရင်လူတွေက ဒီအတိုင်း ပစ်ထားခဲ့ကြတာ လို့ မှတ်ချက် ပေးသူက ပေး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး လာဖြောင့်ဖျကြတယ်။
အချက် ( ၅၀၀ ) ကျော်လာတဲ့ အခါ သူလည်း တဖြည်းဖြည်း ပင်ပန်းလာသလို တယောက်ပြီး တယောက် လာတားကြတဲ့ စကားတွေကြောင့် အားနည်းနည်း လျော့ချင်သလို ဖြစ်လာပါတယ် ။ ကြာလာတော့ သူ့မှာ ဒွိဟ ဖြစ်လာတော့တယ် ။
တဖက်က အချက်ပေါင်း ငါးရာတောင် ကျော်လာခဲ့ပြီပဲ ၊ ဒီကျောက်တုံးကို ဆက်ခွဲမယ် လို့ တွေးမိသလို တဖက် ကလည်း ကျောက်တုံးကြီး ကွဲလို့ အထဲမှာ ဘာမှ မရှိရင်ရော ဆိုတာမျိုးလည်း တွေးနေမိ တယ်တဲ့ ။
အဲဒီလို ဇဝေဇဝါ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကျောက်တုံးကြီးကို ဆက်ခွဲလာ လိုက်တာ ဘယ်နှစ်ချက် ရှိသွားပြီ ဆိုတာကို သူ မေ့သွားခဲ့တယ် ။ အချက်( ၇၀၀ )လား ၊ ( ၈၀၀ ) လား သူမသိတော့ဘူး။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ နောက်ထပ် လူတယောက် ရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ လာသမျှ လူတွေလို ဆက်မလုပ်ဖို့ တားမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီလူကတော့ ပူးပေါင်းဖို့ လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ပါဝင်ပါရစေ ။ တကယ်လို့ ရလာလျှင် ခင်ဗျားက အရင်အားစိုက် ထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝေစုရဲ့ နှစ်ပုံကို ယူပါ ။ ကျွန်တော်က နောက်မှ လာပူးပေါင်းတဲ့ အတွက် ကျွန်တော့်ကို ဝေစု တပုံပဲ ပေးပါ လို့ တောင်းဆို သတဲ့ ။
အဲဒီမှာ ပထမလူ ခဏတော့ တွေဝေသွားတယ်ပေါ့ ။ ဟုတ်တယ်လေ ။ သူကြိုးစားလာတာ အချက်တစ်ထောင် ပြည့်ခါနီးနေမှ လာပူးပေါင်းတာကိုး ။ ပြီးတော့ သူ့ကို ရလာတဲ့ ရတနာရဲ့ သုံးပုံတပုံ ပေးပါတဲ့ ။
နောက်တော့ အို … ကိုယ်က အပင်ပန်း ခံထားတာပဲ ၊ မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ တွေးလိုက်ပြီး ဒုတိယလူရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းလိုက်တယ်တဲ့ ။ ပြီးတော့ ကျောက်တုံးကြီးကို ဆက်ခွဲနေတယ်။
ဒုတိယလူ ကတော့ ထွက်မသွားသေးပဲ ဘေးနာမှာပဲ ထိုင်စောင့်နေ ခဲ့တယ် ။ သူ အချက်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခွဲပေမယ့် ကျောက်တုံးကြီးကတော့ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်သေးဘူး တဲ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ သူလည်း စိတ်ပျက်သွားပြီး လက်လျှော့လိုက် ပါတော့တယ် ။
ပြီးတော့ ဒုတိယလူ ကိုလည်း …
ကျွန်တော် ဒီကျောက်တုံးကြီးကို ထုခွဲလာတာ အချက်ပေါင်း တထောင်ကျော် လောက် ရှိပြီဗျ ။ ဒါပေမယ့် အခုထိ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ အမှန်က ကျွန်တော် ရူးတာပါဗျ ာ။ အစကတည်းက မလုပ်ပဲ နေခဲ့ရမှာ ဆိုပြီး ပြောပါတယ် ။
ဒုတိယလူက ခင်ဗျား ဒီအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဆက် ထုခွဲပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းသတဲ့ ။
ပထမလူက ခင်ဗျားလည်း အပင်ပန်း ခံမနေပါနဲ့ဗျာ ။ ဘာအကျိုးမှ ထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ကတော့ စွန့်လွှတ် လိုက်ပြီလို့ ပြောပြီး ထွက်သွားလေ သတဲ့ ။
သူထွက်သွားလို့ ခပ်လှမ်းလှမ်း အရောက်မှာပဲ ဝုန်း ဆိုတဲ့ အသံကြီးကို ကြားလိုက်ရလို့ လှည့်ကြည့်မိ လိုက်တော့ ကျောက်တုံးကြီး ကွဲနေတာကို အံ့သြဖွယ်ရာ မြင်လိုက်ရ ပါတော့တယ် ။
ကျောက်တုံးကြီး အတွင်းမှာတော့ ဝင်းလက်တောက်ပ နေတဲ့ ရတနာတွေပေါ့။ ဒုတိယလူက ရတနာတွေရှေ့မှာ ပြုံးပျော်လို့ ဝမ်းသာနေတဲ့ ပုံနဲ့။ သူဟာ အံ့လည်း အံ့သြသလို နောင်တလည်း ရသွားပါတယ်။
အမှန်တော့ သူကြိုးစားပြီး ကျောက်တုံးကြီးကို ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ ထုခဲ့တဲ့ အချက် ပေါင်းဟာ (၉၉၉) ချက်ပဲ ရှိသေးတာကို သူ မသိခဲ့တာလေ ။ ဒီတော့ ဒုတိယလူဟာ ကျောက်တုံးကြီးကို ခွဲဖို့အတွက် တချက်ပဲ ထုလိုက်ရတော့ တာပေါ့ ။
တခါတလ ကိုယ်တို့ဘဝတွေမှာလည်း သူများတွေ ကြိုးစားနေချိန် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖို့ရော ကြိုးစားဘူး ပါသလား ? ဘေးကနေ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်ပြီး ကြိုးစားနေသူကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တားမြစ် ဘူးပါသလား ?
ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီးမှ ဘေးစကားကြောင့် အားလျော့ စိတ်ပျက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ဘူးပါသလား ? တွေဝေမိတဲ့ ဒွိဟစိတ်တွေကြောင့် ထားလက်စ ရည်မှန်းချက် ပျောက်သွားတာ မျိုးရော ဖြစ်ဘူးပါသလား?
ကြိုးစားလက်စကို ရပ်တန့်ဖို့များ စဉ်းစားမိရင် … မထုမိလိုက်တဲ့ တူတစ်ချက်ကြောင့် ဘဝကို ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံး သွားတတ်တာကို မမေ့ပါနဲ့နော် ။
လူတွေက ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ချီးမွမ်းသည် ဖြစ်စေ ၊ ကဲ့ရဲ့သည် ဖြစ်စေ ၊ လှောင်ပြောင်ရှုံ့ချသည် ဖြစ်စေ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မဖျက်ဆီးလိုက် ပါနဲ့ ။
အရှင်ပုည( ဝကုန်း )